Madaxweyne Gaas oo xil ka qaadis ku sameeyay isu-duwihii wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Gaas oo xil ka qaadis ku sameeyay isu-duwihii wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland
Wararka laga helayo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday mas’uul ka tirsan maamulkaas, kaas oo dhawaan shaaciyay inay ciidamada Puntland qaadeen weerarkii Jeexdin ee lagu dilay askar ka tirsan maamulka Galmudug.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa la sheegay inuu xilkii ka xayuubiyay isu-duwihii wasaaradda warfaafinta Puntland ee gobolka Mudug ninka lagu magacaabo C/naasir Bedel Khalaf.
Mas’uulkaan ayaa war uu saxaafadda siiyay ku faanay in Puntland ay fulisay duqeyntii gobolka Mudug oo lagu laayay dagaalameyaal ka tirsan Al-shabaab oo weerar kusoo ahaa magaalada Gaalkacyo.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaan weli wax war ah oo rasmi ah kasoo saarin duqeyntii ka dhacday deegaanka Jeexdin ee duuleedka magaalada Gaalkacyo, waxayna arrintaan keentay tuhun fara badan oo ku saabsan sidii ay wax u dhaceen iyo doorka ay ku lahaayeen ciidamada Puntland.
Ugu dambeyntii, maamulka Galmudug iyo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Puntland ku eedeeyay inay sheegato weerarkii lagu qaaday deegaanka Jeexdin ee duuleedka Gaalkacyo, waxaana weli socda baaritaanka duqeynta Mareykanku ku laayay askarta Galmudug.